Waxaan ku dhashay Cunuga Daalimka ah - Akhriso Webtoon Korean Manhwa - Manhua - Manga iyo Light Novel Online oo bilaash ah
Waxaan Dhalay Ilmaha Daalim Celceliska 4.5 / 5 ka mid ah 4
Maalin ka dib habeenka ugu xafladaha badan sanadka, Ilya ayaa indhaha kala qaaday waxaana lagu soo dhaweeyay nin qaawan oo dhabarka muruqsan. Ilya si dhakhso leh ayey ugu aqoonsatay inuu yahay Cairat, oo ah boqorka lagu yaqaan naxariis darada, sidaa darteed waxay ku tagtay xawaaraha iftiinka ka hor inta uusan soo kicin. Ilya wuxuu rajaynayaa inuu iloobo habeenki hore oo uu usocdo sidii wax aan dhicin. Laakiin arrimuhu uma socdaan sidii ay filaysay “Uur baan ahay ??” Canugga daalimka ah waxaa laga soo maleeyay hal habeen istaag. "Maxaa dhacaya haddii haweenay ay ilmo Haybad leedahay ay soo muuqato?" "Cunug aan aheyn inuu jiro, markaa dabcan waan la macaamili lahaa." Qaab ahaan, wuxuu u sheegay inuu dili doono haweeneyda iyo ilmahaba. Waa inaadan waligaa u sheegin boqorka inaad uur leedahay. Ilan waxay go aansatay inay sirtaan waligeed qarsato, iyadoo ka baqaysa waxa ku dhici kara ilmaheeda hadii la ogaado cida aabuhu yahay Laakiin falalka Emperor waa wax aan caadi ahayn ...
Haddii aad jeceshahay webcomics, ku raaxeyso degelkeenna si aad u aqriso webcomics, webcomics xun wiki, webcomics ugu fiican, webcomics top, werewolf webcomics, webcomics app, webcomics xun, yuri webcomics, webmaska ​​qaangaar ah, webcomics khaniis, nsfw webcomics, lgbt webcomics, webcomics list, webcomics furry, fantasy webcomics, sida loo sameeyo webcomics, jaceylka webcomics, alfie webcomics, belfry webcomics, webcomics wanaagsan, dnd webcomics, tg webcomics, lesbian webcomics, vampire webcomics, sci fi webcomics, webcomics ugu fiican 2018, webcomics caan ah, webcomics naxdin leh, webcomics reddit, queer webcomics, bl webcomics, maqaal qosol badan, d & d webcomics, websaydhka webcomics, trans webcomics, tv tropes webcomics, dib u eegista webcomics, webcomics online, gabar sixir webcomics, reddit webcomics, webcomics dhammeystiran, webcomics line, transgender webcomics, hal feer nin webcomics, sexy webcomics, websaydhka duck, overwatch webcomics, dib u eegista webcomics.
Cutubka 17 April 2, 2021
Cutubka 16 March 27, 2021
Cutubka 15 March 19, 2021